2 Tantara 36 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 36
Ny mpanjaka farany tamin'i Jodà: Joakaza, Joakima, Joasina, Sedesiasa - Ny nandravan'i Nabokodonozora an'i Jerosalema - Lasan-ko babo Jodà - Ny niafaran'ny fahababoana, tamin'ny andron'i Sirosa.
1Joakaza, zanak'i Josiasa, no nalain'ny vahoaka tamin'ny tany nampanjakainy handimby an-drainy, tao Jerosalema. 2Telo amby roapolo taona Joakaza fony vao nanjaka, ary telo volana no nanjakany tao Jerosalema. 3Naongan'ny mpanjakan'i Ejipta tao Jerosalema izy, sady nampandoaviny vola talenta volafotsy zato sy talenta volamena iray ny tany. 4Fa Eliasima, rahalahin'i Joakaza no nampanjakany tamin'i Jodà sy Jerosalema sy novany anarana hoe: Joakima. Ary Joakaza rahalahiny, nalainy dia nentiny nankany Ejipta.
5Dimy amby roapolo taona Joakima fony vao nanjaka, ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo Andriamaniny izy. 6Niakatra hamely azy Nabokodonozora mpanjakan'i Babilona, ka nafatony tamin'ny gadra varahina roa izy, hoentiny any Babilona. 7Nentin'i Nabokodonozora ho any Babilona ny fanaka sasany tao an-tranon'ny Tompo, ka nataony tao amin'ny tempoliny any Babilona.
8Ny asan'i Joakima sisa, ny fahavetavetana nataony, mbamin'ny toetrany hita, dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'i Jodà sy Israely. Ary Joasina zanany no nanjaka nandimby azy.
9Valo taona Joasina fony vao nanjaka, ary telo volana sy hafoloana no nanjakany tao Jerosalema. Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo izy. 10Nony niherina ny taona dia nasain'i Nabokodonozora mpanjaka nentina ho any Babilona izy, mbamin'ny fanaka sarobidy tao an-tranon'ny Tompo. Ary Sedesiasa rahalahin'i Joasina, no notendreny ho mpanjakan'i Jodà sy Jerosalema.
11Iraik'amby roapolo taona Sedesiasa fony vao nanjaka, ary iraik'ambin'ny folo taona no nanjakany tao Jerosalema. 12Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo Andriamaniny izy, ary tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany, izay niteny taminy, tamin'ny anaran'ny Tompo. 13Nikomy tamin'i Nabokodonozora mpanjaka aza izy, izay efa nampianiana azy tamin'ny anaran'Andriamanitra. Nanamafy ny hatony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hiverenany amin'ny Tompo Andriamanitr'Israely.
14Ny lehiben'ny mpisorona rehetra mbamin'ny vahoaka koa nandroso nanao fahadisoana manaraka ny fahavetavetan'ny firenena, sy nandoto ny tranon'ny Tompo, izay efa nohamasininy, tao Jerosalema. 15Malaky sady matetika no nampitondra teny fananarana tany amin'izy ireo, Iaveh Andriamanitry ny razany, tamin'ny alalan'ny irany, fa nangoraka ny vahoakany sy ny fonenany izy. 16Kanjo niomehezan'izy ireo ny irak'Andriamanitra, notsiratsirainy ny teniny, ary novazivaziny ny mpaminaniny, mandra-pihatran'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny vahoakany tsy azo notohaina intsony.
17Tamin'izay dia nentin'ny Tompo hiakatra hamely azy ireo ny mpanjakan'ny Kaldeana, ary novonoin'io tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny fitoerany masina, ny zatovony, tsy nisy nananany antra, na ny tovolahy, na ny tovovavy, na ny antitra na ny fotsy volo, fa natolony ho eo an-tànany avokoa. 18Nentin'i Nabokodonozora ho any Babilona avokoa ny fanaka teo an-tranon'ny Tompo, na ny lehibe na ny kely, ny rakitry ny tranon'ny Tompo, ny rakitry ny mpanjaka, ary ny an'ireo filohany. 19Nodorany ny tranon'Andriamanitra, noravany ny mandan'i Jerosalema, notselarany ny afo ny lapa rehetra teo, ary nosimbany ny fanaka saro-bidy rehetra. 20Nentin'i Nabokodonozora ho babo tany Babilona ny olona sisa tsy matin-tsabatra, ka tonga andevon'izy sy ny zanany ireny, mandra-panjakan'ny mpanjakan'i Persa. 21Izany no nahatanterahan'ny tenin'ny Tompo, tamin'ny vavan'i Jeremia: Mandra-pahazon'ny tany ny onitry ny sabatany, fa nitsahatra izy mandritra ny fotoana nahafoana azy, dia mandra-pahafenon'ny fitopolo taona.
22Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Sirosa, mpanjakan'i Persa, dia namporisihin'ny Tompo, ny fanahin'i Sirosa mpanjakan'i Persa, mba hahatanteraka ny tenin'ny Tompo tamin'ny vavan'i Jeremia, ka nasainy natao kabary sy nolazaina an-tsoratra hiely eran'ny fanjakany izao teny izao: 23Izao no lazain'i Sirosa mpanjakan'i Persa: Efa nomen'ny Tompo Andriamanitry ny lanitra ahy ny fanjakana rehetra eto an-tany: ary efa nandidy ahy izy, hanao trano ho azy any Jerosalema. Koa iza avy moa aminareo no vahoakany? Homba azy anie Iaveh Andriamaniny ary aoka hiakatra izy... >